ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ ဘ၀တွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ ဘ၀တွေ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Aug 12, 2013 in Creative Writing | 37 comments
ကျွန်မအခုတလောတော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ကလေးရှိနေပါတယ်။ ဟိုတ လောက ကိုမျိုးသန့်ရေး လိုက်တဲ့ကဗျာလေးဖတ်ပြီးတော့ ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်။ ကျွန်မ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရိုးသားစွာငွေရှာနေတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘွဲ့ရတွေမဟုတ် တော့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေမှာ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရင်းရတဲ့ငွေကို သူတို့လဲ သုံး မိသားစုလဲမျှရင်းနေထိုင်လာကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မအတော်သဘောကျခဲ့ပါ တယ်။ မနက်ဆို လှလှပပလေးဝတ် အလုပ်လာ၊ အလုပ်ရောက်ရင်လုပ်ငန်းခွင်ဝတ်စုံလဲ။ တနေ ကုန်လုပ်၊ ညနေရေမိုးချိုးအလှပြင် အိမ်ပြန်။ ဟုတ်လို့။ အဲတနေ့တော့အဲလိုလုပ်နေတဲ့ကောင်မ လေးအုပ်စုထဲကတယောက်က ထူးထူးခြားခြားငွေသုံးလာတာကိုသတိထားလိုက်မိပါတယ်။ ဟန်း ဖုန်းနဲ့ဘာနဲ့။ နောက်ကောင်လေးတွေလာကြို။ ပိုက်ဆံတွေတအားသုံး။ မူပျက်နေတာအလုပ်ရှင်က သတိ ထားမိလာပါတယ်။ နောက်တော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနေ့ခင်းအရမ်း အိပ် ငိုက်လာတာ သတိထားမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲစုံစမ်းလိုက်တော့ Night Club မှာအလုပ်လုပ်နေ တာတဲ့။ တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ သူ့မိဘတွေကလဲ ပိုက်ဆံရရင်ဘာမှမပြော တဲ့မိသား စုဆိုတော့ သူလဲအဆက်အသွယ်ကောင်းတော့ပါသွားတာပေါ့။ သူတို့ဆီကတစွန်းတစ ပြန်ကြားရတာတော့ ညဆို ခန်းမနောက်မှာ မတ်တပ်ကလေးတွေရပ်နေတယ်တဲ့။ ၀ိုင်းတွေကခေါ် ရင် By Name မဟုတ်ရင် ၀ိတ်တာနဲ့ အလွမ်းသင့်တဲ့သူထိုင်ရတယ်ပေါ့။ တ၀ိုင်းကို ၈၀၀၀၀ ရတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ အဆင်ပြေလို့ ညပိုင်းအပြင်လိုက်ချင်လဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့။ သူတို့ကတော့ ပျော်နေ ပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ကြားရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ။ ၀ိတ်တာတွေနဲ့ အလွမ်းသင့် တယ်ဆိုတာကလဲ ဘာလဲဆိုတာသိနေတော့ ပိုစိတ်မချမ်းသာရပါဘူး။ သူတို့ကလဲ ဖောက်သည်ကလဲအရေးကြီးသလို ၀ိုင်းရဖို့ကလဲ ၀ိတ်တာတွေကြည်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ မိအေး နှစ်ခါနာရတဲ့ဘ၀ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံက တညဆိုဆိုသလောက်ရနေတော့နာလို့နာ မှန်းမသိကြရှာ ဘူး။ အဲလိုနဲ့ အဲဒီကောင်မလေးထွက်သွား ပြီး သူလဲတရားဝင်လုပ်နေတယ်ပေါ့။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီအလုပ်ထဲက နောက်ကောင်မလေး တစ်ယောက် သူကနေဆက်ပေး လိုက်တာပါသွားပြန်ရော။ ဘာကြောင့်ပါသွားပြန်တာလဲလို့ လေ့လာလိုက်တော့ သူတို့မိသားစု အခြေအနေက ဒီလိုလမ်းကို တွန်းပို့ လိုက်တာပဲလို့တွေ့ မိပါတယ်။ မိသားစုများ၊ မိဘအိမ်ထောင်ရေး မပြေလည်၊ ၀င်ငွေနည်း ပါး၊ မှီခိုသူများရာကနေ အဘက်ဘက်ကအဆင်မပြေနေလေတော့ ဘာမှမလုပ်အုံးတော့ ၀ိုင်းထိုင် အရက်ငှဲ့ပေးရုံနဲ့ တည ၈၀၀၀၀ ဆိုတာ နဲတာမှမဟုတ်တာ။ မက်လောက်စရာပမာဏဖြစ်နေ လေတော့ သူတို့ဒီလမ်းကိုရွေးသွားတာ မဆန်းဘူးလို့ပဲပြော ရတော့မှာပေါ့။ အဝေးသင်နဲ့ ဘွဲ့ရ ပြီးတော့ အလုပ်ရှာတော့လဲအရောင်းစာရေးမလောက်ပဲရ၊ ၀င်ငွေက သူတို့လမ်းစရိတ်အ၀တ် အစားဖိုးနဲ့တင်အိမ်ပြန်မပေးနိုင်။ အဲဒီ ဘ၀ကနေ အခုလိုလမ်းစ လဲတွေ့ရော မှန်သည်မှားသည် မဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲ ထွက်ပေါက် တခုဖြစ် သွားရတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင် ပညာရေး၊ အသိပညာတွေကို ရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ပဲ အပစ်တင်ချင်ပါတော့တယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တွေနည်းပါးနေသေးသမျှတော့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး တွေကြုံတွေ့နေရအုံး မှာပဲလို့ထင်မိပါတယ်။ ညနေ ဖက်ကန်ဘောင်ကိုလမ်းလျှောက်တုန်းကဆိုလဲ အဲလိုကောင်မလေး တွေ အရွယ်ကောင်းလေးတွေ ချစ်စရာလေးတွေ မမြင်ချင်မှအဆုံး စိတ်မကောင်းစွာတွေ့နေ ရပါတယ်။ ခေတ်စနစ်ရဲ့အမွေဆိုးတွေကို ဒီကလေးတွေခါးစည်းခံ နေရတယ်လို့ပဲမြင်မိပါတယ်။ ပထမတော့ အထင်တော်တော်သေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်က ကလေးတွေပါသွား တော့မှပဲ သူတို့ရွှေးချယ်စရာများများမရှိတာကိုနားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ မိသားစုတွေအားလုံးအလုပ်ရှိ ပညာကလဲသုံးစားလို့ရ ပူပင်စရာမရှိတဲ့ဘ၀မှာ ဒီလိုဘ၀မျိုးကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့ အပြစ်ဆို စရာ ဖြစ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ အခုလို တနေ့လုပ်တနေ့စားမိသားစုဘ၀မှာကျတော့ ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ် တာဟာ ကံကြမာကြောင့်လို့ပြောရမလား စနစ်ဆိုးရဲ့အမွေလို့ပြောရမလားမသိတော့ပါဘူး။
အဓိက ကတော့ ဝတ်ချင်စားချင် သုံးချင်စိတ်နဲ့ ငွေနောက်လိုက်သွားကြတာပါ…
ပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတင်မဟုတ်၊ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းလို့ ဆိုရမလိုဖြစ်နေပြီ…
မြင်နေရတာတော့ မက္ကာအိုမှာ ပိတ်ရက်ဆို ကျောင်းသူလေးတွေ အပိုဝင်ငွေရှာကြသတဲ…
အာရှကတင်မဟုတ်၊ EUROPE ကတောင် ပါသေး…မသဲရဲ့
ဒီမှာကတော့ အဓိကက စားဝတ်နေရေးမပြေလည်တာတွေပေါ့ ဦးကျောက်ရေ။ တခြားကလေးတွေတော့ မသိပေမဲ့ အခုကျွန်မပါတ်ဝန်းကျင်က ကလေးတွေကတော့ တကယ့်ကို မိသားစုလိုက်မပြေလည်တော့ လွယ်လွယ်ရတဲ့နောက်လိုက်သွားကြတာနဲ့တူပါတယ်။ စိတ်မကောင်းတာတော့တကယ်ပါပဲ။
အဲဒီ ပြေပြေလည်လည် ဆက်ဆံတဲ့သူတွေနဲ့သွားပြီး
တစ်ချို့ကတော့ နောက်ကြောင်းမအေးကာ မပြေလည်ကြသူများလည်း ရှိတတ်ပါကြောင်းတဲ့။
အင်းမုန့်လုံးစက်ကူကပ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါ့ ကိုခင်ခရေ။ ကိုခင်ခပိုစ့်နဲ့ဆက်စပ်လိုက်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းပြည်မှာလူဖြစ်ရတာ သနားစရာပေါ့။
အဓိက ဟာ အဓိက ပါပဲ …
ဆိုပြီး လွဲမှားတဲ့ အဓိက နောက် အဓိက လိုက်သွားကြတယ်လို့ ….
ထင်ဒါဘာဗျဲ တိုရီးသဲ …
အေးလေဟာ သူ့မိဘများကဘာမှမပြောတော့ ဒို့လဲမပြောသာဘူးပေါ့။ တရားချရအောင်ကလဲ သူ့ကို အဲလောက်လစာမပေးနိုင်။ ခက်တာပေါ့အေ။ လွဲမှန်းသိသိကြီးနဲ့လက်လွှတ်လိုက်ရတာပဲလေအေ။
ယောက်ျားတွေဟာ ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကျတော့ ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ ။
အမှန်ပဲရွှေမိုးတိမ်ရေ ဒီမိန်းကလေးတွေလဲ ဆင်းရဲလွန်းလို့ဖြစ်သွားရတာပါ။
တချို့ကတော့ ဒါကြီးကိုဘယ်လိုမှ မနေပဲ ပျော်နေတယ်
တချို့ကတော့ ဒါဟာ ဆန်ဆီအဝတ်အစားအတွက်တဲ့ ၊
မပြေလည်တဲ့ မိသားစု ပေါ့လေ ၊
ခေတ်လား စနစ်လား လူလား
အင်းလောလောဆယ်တော့ စနစ်ကြောင့်လို့ပြောရမှာပဲ ( သဂျီးမလာခင် )။ နောင်တိုင်းပြည်စည်ပင် အလုပ်အကိုင်တွေပေါလာလို့ ဆိုရင်တော့လဲ လူကြောင့်ပဲလို့ပြောရတော့မှာပေါ့ကိုမျိုးသန့်ရေ။
ခက်ပါ့ကွယ်။ အရင်တုန်းကတော့ မြန်မာစကားရှိတယ်။
တို့က အသက်နဲ့ လူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အရှက်နဲ့ လူလုပ်တာ။
ငတ်လို့သေပါစေ။ လျှာပေါ် မြက်ပေါက်ပါစေ။
အရှက်မရှိတဲ့ အလုပ် လုပ်စားပြီး ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ အပျက်ခံပြီး အသက်မဆက်ဘူးဆိုတာတွေ ခုတော့ ပျောက်ကုန်ပါပေါ့။
အသက် ဆက်ဖို့ထက် မော်ကြွား ပလွှားချင်တာတွေကြောင့်လဲ ဒီလို ဘ၀မျိုးမှာ နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ဘ၀ပေး ကံကြမ္မာလို့ ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။
အ၀တ်အစား အနေအထိုင် စည်းကမ်းပျက် လော်လည် လို့ ဒီလိုဘ၀မှာ ပျော်နေ မော်နေ ကြတဲ့ သူတွေပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဆင်းရဲတဲ့ ဒဏ်မခံနိုင်လို့ ဘ၀ပျက်တာ ဟာ ကံကြမ္မာကို ပုံချဖို့ မသင့်ဘူးလို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်မထိမ်းနိုင်ရင် ကံ ပဲလို့ ပုံချချင်ကြတာများတယ်လေ။
ဒါပေမယ့် ဆင်းရဲတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းလည်း ဒီလို ဘ၀မျိုးကို ရွေးချယ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မှန်ပါတယ် ကို Kyi Lwin ရေ။ အတူတူလုပ်နေကြတဲ့ထဲမှာမှ နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့ သူတို့စိတ် မခိုင်တာရယ် မိသားစုရဲ့တောင်းဆိုမှု့တွေများတာရယ် လိုချင်တာတွေများတာရယ်ကြောင့်ဘ၀တခု လုံး ပေးဆပ်လိုက်ရတာပေါ့။ နောင်တချိန်ရုန်းထွက်နိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရတော့မှာပါပဲ။
ချမ်းသာလိုက်ကြတာနော်.. အရက်ငှဲ့ပေးတဲ့မိန်းကလေးတောင် အဲဒီလောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လေ.. စင်တင်မှာဆိုလည်း အဲလိုယောက်ျားတွေ အပြိုင်အဆိုင်ပန်းကုံးစွပ်ကြတာ အတန်းလိုက်.. သိန်းဆယ်ဂဏန်းချီတယ်တဲ့.. အများအတွက်အကျိုးရှိမယ့်နေရာတွေမှာ အဲဒီပိုက်ဆံတွေသုံးရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်..
အောင်မယ်လေး အေ သုံးချက်ကတော့ ပက်စက်တယ်။ တညထဲသိန်းပေါင်းများစွာပါ။ တကယ်နှမျောစရာပါ
အသည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရောဂါတွေဖြစ်ရတာ
လူပျိုတွေ အပျိုတွေ ပဲ အရင်သေကြရမလိုလို
အေးဟာ အပြင်စာသိပ်မစားနဲ့ပေါ့အေ။ အပိုင်ဝယ်ထား။
ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ ဘဝမို့ ကြုံ ရာကျရာမှာပဲ ကြုံသလိုနေတယ်ဗျာ
သူများထမင်းလုပ် လုစားဖို့ကိုတော့ တတ်နိူင်သရွေ့  ရှောင်တယ်။
တစ်နေ့လုပ် မှ တစ်နေ့ စား..
တစ်ရက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင်.. ငတ်ပြတ်သွားရ တဲ့ ..
အမောတွေ… မျိုးစုံရှိနေတယ်နော်.. ။
သူတို့ ကို မြင်တိုင်းးး
ငါလဲသူတို့ကတွေ့တော့ပိုမောတယ်အေ။ သူတို့နောက်ခံဘ၀တွေကိုပါသိမြင်နေတော့ တော်တော်ကိုမောပါ တယ်။
မြန်မာပြည် (ရန်ကုန်) မှာ Day Club ကနေ နာမည်ပြောင်းလို့ Day Party ဆိုပြီး ဆယ်ကျော်သက် တွေ ကျောင်းလစ် ကျူရှင်အကြောင်းပြလစ်ပြီး သောင်းကျန်း နေတဲ့ သတင်း ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ အတော်လေးစိတ်ပျက်သွားတယ်။
ဒီ အစိုးရ သာ ဆက် နေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ အနာဂါတ်လူငယ်တွေအတွက် ဘာမှ ကို မျှော်လင့်လို့ မရတော့ဘူး။
ဒီလို နေရာတွေဟာ လူငယ်တွေ အတွက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ လူမျိုးဘာသာ စောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ သူများ မမြင်ကြတော့ဘူးလား၊ မသိကြတော့ဘူးလား။
အမြင်ကျဉ်းကျဉ်း နဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု ကိုဘဲ အပြစ်လုပ် ပုံကြီးချဲ့ နေပြီး ကျန်တဲ့ ဟာကွက်ကြီး တွေ ကို တော့ မျက်စိပိတ် နားပိတ် နေကြရင်ဖြင့် ပိုပိုပြီး ဆိုးတဲ့ ရွေးစရာမရှိတဲ့ဘဝ တွေကိုဘဲ မြင်ရတော့မယ်။
ကိုယ်ကို မထိသ၍ နေသာနေတဲ့ သူတွေ များနေရင်တော့ လဲ ဟိုဘက်က မောင်ပေ ပြောနေသလို “ကျွဲ” လို့ သာ အော်နေဖို့ဘဲ ရှိတော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ ဟိုနိုင်ငံဆိုတာအခုမှဖြစ်တော့တာအရီးရေ။ တကယ်ပါပဲ။ အရင်ကမှဒိုင်လျှိုိလုပ်သေး။ အခုဆိုပေါ်တင်ပဲ။ နေ့လဲနေ့ ညမို့လဲည။ ကပေပြောသလို ကျွဲပဲဖတ်တော့မှထင် ပါ့အရီးခင်ရေ။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်တုံးက မြန်မာမှာ တယ်လီကွန်းပရောဂျက်လုပ်ဖို့လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေရုံးကို လာလည်ကြတယ်။ သူတို့ကို ရုံးက ဒင်နာလိုက်ကျွေးရင်း မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောမိတော့… “ငါတို့ သတင်းကြားထားတာ မြန်မာမှာ မိန်းကလေးဦးရေက ယောက်ကျားလေးဦးရေထက်များတယ်။ ယောက်ကျား လေးတွေက သိပ်အလုပ် မလုပ်ဘူး။ မိန်းကလေးတွေက အလုပ်ကြိုးစားတယ်.. ဟုတ်လားတဲ့…”
နဲနဲတောင်မစင်းစားဘူး “ဟုတ်တယ်” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်
ပြီးတော့ သူတို့က ရုံးခန်းဖွင့်ဖို့ ရန်ကုန်အနှံ့ မြေ၊ အိမ်တွေ လိုက်ကျိတော့ မေးပြန်တယ် “နင်တို့ မြန်မာမှာ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက သိပ်မပြေလည်တဲ့ ကိုယ့်လူမျိူး အချင်းချင်း မကူညီကြဘူးလားတဲ့”
“ငါတို့ဆီမှာ ချမ်းသာလာရင် ဘုရားတည်တယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလှုတယ်လို့၊ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ကူညီတာမရှိဘူး လို့” :harr:
သူတို့က ပြန်မှတ်ချက်ချတယ်…. နိုင်ငံရေးပါလို့ ပြန်မပြောတော့ပါဝူး…
အင်းလောလောဆယ်ဆယ်ပြောလိုက်အုံးမယ် စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တာ Wow ရေ။ နိုင်ငံကို စနစ်တကျဖျက်စီး ခံလိုက်ရဒါ။ ( သဂျီးလာဘီပြေးမှ )
ဂျာ အေး ကို သူ့ အ မေ ရိုက် တဲ့ ကိစ္စ တွေ မို့ ပြောချင်တော့ဘူးးးး
အရီးပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီလူဂျီးတွေနဲ့သာဆို ဒီ အတိုင်း ဆက်ဖြစ်နေမှာ။
ချမ်းသာတဲ့ ကလေးမတွေ နန့်ကြောဆွဲတာပဲ ကြည့်ပြီး အပြစ်ပြောနေတဲ့ သူများ
ဒီလို ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေ ဘဝကိုကျ မမြင်ကြဘူးထင်တယ်။
နောက်မျိုးဆက် တစ်ဆက်လောက်ထိ စိတ်ဓာတ်တွေရော လူတွေရော ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ စံနစ်ကြီးးးးး နောက်တက်တဲ့လူ က ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လုပ်နိုင် အပြောခံရဦးမယ်။
ရှေ့က တာဝန်မဲ့ လူတွေကို မပြောရဲသမျှ နောက် တာဝန်ယူတဲ့သူတွေကို ပြောရဲကြဦးမယ်။
မှန်လိုက်တာ garfield ရေ။ တကယ့်ကိုမှန်တဲ့စကားပါပဲ။
ရန်ကုန်တမြို့လုံးမမြင်ချင်မှအဆုံးပဲ ဦးကြီးမိုက်ရေ။ မခင်နှင်းဆီတွေမှ အရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံ။
ပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်ပေမယ့် တစ်ခြားဘက်က လှည့်ပြောခွင့်ပေးပါ…
အဲ့ယောက်ျားတွေပေါ့…အိမ်မှာ မိန်းမကတော့ ကလေးတွေနဲ့ သူတို့ပြန်အလာကို စောင့်လို့… သူတို့ကတော့ အရက်ငှဲ့ပေးရုံတင် ၈၀၀၀ ပေး၊ ပန်းကုံးဖိုးကို သိန်းနဲ့ချီသုံး…. ပျော်ပါးလုိ့…
အဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပရဟိတတွေမှာ လှူကြပါလားဟင်င်.. ပေးတဲ့သူရှိလို့ လိုချင်သူတွေ လမ်းမှားလိုက်တာ…
ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်ကိန်း ဖြစ်နေသလားလို့…
အောင်မယ်လေး ဒါမျိုးတွေကိုများ သွားအလှုခံကြည့်ပါလား။ ကိုယ်တောင်ပိုက်ဆံပြန်ပေးခဲ့ရအုံးမှာ။ ချူသံပါအောင်ညီးပြလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးကဘယ်လို ဒေါ်လာကဘယ်ကဲ့သို့နဲ့။ စိတ်ကုန်စရာပါအေ။ သူဋ္ဌေးညီးတာများသောက်ညင်တောင်ကပ်တယ်။ တကယ်ပါ။ အဲလိုဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်မျိုးဆိုလို့ကတော့ ပန်းကုန်းကိုအပြိုင်စွပ်တာ ကားတောင်ထားပစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ ဟိုဘက်ဝိုင်းနဲ့ဒီဘက်ဝိုင်းအပြိုင်စွပ်တာ။ တကုံးကို ၁၀ သိန်း ၁၅ သိန်းတန်တောင်ရှိဆိုပဲ။ အံ့သြရော။
အန်ကယ်ဂျီးရေ ရွေးစရာကများများမရှိဘူးတကယ်ပါ။ သူတို့ရိုးသားစွာလုပ်တဲ့တလစာဟာ ဟိုကတညစာ နဲ့ညီမျှလေတော့ အလေးသာတဲ့ဖက်လိုက်သွားတာဟာရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပေါ့။ တကယ်လို့သာ သူ့ကိုမှီ ခိုမဲ့မိသားစုမရှိပဲ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းရမဲ့ဘ၀ဆိုရင်တော့ ဟိုလမ်းလိုက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ခေတ်စနစ် ရဲ့တောင်းဆိုမှု့ပေါ့လေ။ စနစ်ကိုပဲပြောရမလား သူတို့ကိုပဲပြောရမလား တကယ်ကိုမသိတော့ပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေ ပိုက်ဆံလိုရင် အချိန်ပိုင်း လိုက်ကြတယ်.. အာရှမှာလည်း မထူးဆန်းတော့ဘူး… ငွေတခါ အလွယ်ရဘူးရင် ပင်ပင်ပန်းပန် လုပ်မစားချင်တော့ဘူးဗျ… ပြည့်တန်ဆာ အခွင့်အရေး ဥပဒေကနေ ထွက်လာမည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်ပါတယ်…။ တချိန်က နယ်စပ်တွေမှာ မိဘကို အဲဒီနည်းနဲ့ လုပ်ကျွေးရင် ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုလို့ တိုင်းရင်းသူများစွာ ဘဝပျက်ခဲ့ကြတယ်။။ အခုလည်း တလွဲဆံပင်ကောင်းဖြစ်၊ ဂေါင်းတွေရဲ့ အသုံးချခြင်း ခံရမှာ စိုးပါ၏…။ ကြောင်ကြီးကတော့ ရလျင်တီးမှာပဲ… အရှောင်ဗူး…။
အပြင်စာစားရင် ကင်ဆာဖြစ်သတဲ့ ကပေပြောဒယ်။ အိုက်ဒေါ့ အုအုကြောင်လဲ သတိတော့ထားပါလေ။ ချင့်သုံးပေါ့
မွတ်ဆလင်တို့ပြည်.. ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့.. မက်ခရိုဖိုင်းနန့်စ်ကို… မြန်မာတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး.. နိုင်ငံတကားအကူအညီနဲ့.. လုပ်တဲ့သူရှိတယ်..
ဆိုတော့.. ငွေချေးတယ်ဆိုပါစို့..။ မရှိဆင်းရဲလယ်သမားတွေကို…
၁သိန်းချေးတယ်.. ပြန်ဆပ်ရင်.. ၃သိန်း.. စသဖြင့်ပေါ့…။
ပြဿနာက.. ဆပ်ရမယ့်အချိန်ပြန်လာဆပ်တဲ့သူ.. ၁၀ရာနှုန်းလောက်ပဲရှိနေသတဲ့..
တောထဲ.. ရွာထဲအထိလိုက်.. စစ်ဆေး.. ဆာဗေးလုပ်တာပေါ့…
(အရင်က.. အဲဒီသံအမတ်ဟောင်းကြီး.. မဆဲတတ်ဖူးတဲ့ဗျ.. အင်မတန်ဘာသာတရားလည်းကိုင်းရှိုင်းတာ… အဲဒီနောက်ကတော့.. လူတန်းစားတခုကို ဆဲသမှ.. ဆဲဆဲဆဲဆဲ.. တဲ့…)
တခါတလေမှာ မရှိတာထက် မသိတာခက် ဆိုသလို အသိတရားမရှိကြလို့ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတာတွေ အများကြီးပဲ။
ဆင်းရဲတဲ့ရောဂါကို ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုရင်း ဘ၀ပျက် နိမ့်ကျကုန်ကြရာက ပြန်ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူး။